Taariikh Nololeedka Bollywood Action Hero Suniel Shetty Min Bilaaw Ilaa Dhamaad (+Sawiro) – Filimside.net
Taariikh Nololeedka Bollywood Action Hero Suniel Shetty Min Bilaaw Ilaa Dhamaad (+Sawiro)
August 11, 2018 Ali Aadan
Taariikhda: August 11, 2018
Suniel Shetty waa atoore ka tirsan Bollywood-ka sidoo kalena ah filim qarash gareeye una dheer yihiin inuu ganacsiga heer sare ka gaaray.
Suniel Shetty oo ay Soomaalida u taqaan Balwaan ayaa ka mid ah atoorayaasha Bollywood-ka ee loo asteeyay in looga haray dhanka Action-ka.
Sunil ayaa Bollywood-ka heerkii ugu sareesay ka gaaray 90-kii sidoo kalena xidigan u suura gashay inuu mudo 25-sano ka badan uu fanka ku dhex jiro asigoo kasoo jeedin qoys Bollywood-ka ku lug leh.
Suniel Shetty in ka badan 110-filim oo kale duwan ayuu sameeyay wuxuuna xidigan sameeyay aflaan badan oo daafaha caalamka aad looga xiiseeyo kana mid yihiin Dilwale (1994), Anth (1994), Mohra (1994), Gopi Kishan (1994), Krishna (1996), Sapoot (1996), Rakshak (1996), Border (1997), Bhai (1997), Hera Pheri (2000), Dhadkan (2000), Main Hoon Na (2004) iyo kuwo kale.
Sunil wuxuu ka mid yahay atoorayaasha fara ku tiriska ah ee Bollywood-ka ka tirsan kaasi oo qof walbo saaxiib la ah wuxuuna midaas ku muteestay in loogu yeero Anna oo micnaheeda yahay “Walaal”.
Xidigan ayaa aabo u ah Athiya Shetty oo sanadkii hore Bollywood-ka kusoo biirtay sidoo kalena wiilkiisa Ahan Shetty isagana mustaqbalka dhow ayuu fanka soo gali doonaa.
54-jirkan ayaa soo maray marxalado kala duwan noloshiisa gaarka ah ilaa uu halgan adag usoo galay inuu noqdo atoore caan sidoo kalena shaqsi isku filan.
Suniel Shetty Iyo Bilawgii Noloshiisii Marxaladaha Ay Soo Martay:
Suniel wuxuu kasoo jeedaa qowmiyada Bunt ee ku hadlaan luqada Tulu wuxuuna xidigan ku dhashay tuulada Muli ee magaalada Manglore kuna taalo gobolka Karnataka ee Koonfur Hindiya.
Suniel wuxuu dhashay 11 Augut 1961 waa xidig kasoo jeedo qoys dabada hoose ku nolaan jireen sidoo kalena nolol adag soo maray.
Sunil waxaa la dhasheen labo gabdhood Sujeta Shetty oo isaga ka weyn sidoo kalena dalka Mareekanka reer ku leh iyo gabar isaga ka yar ee lagu magacaabo Sumita Shetty.
Suniel Shetty oo ka hadlaayay noloshii aabihiis soo maray wuxuu yiri “Aabahey asigoo 9-jir ah ayuu Manglore kasoo tagay wuxuuna yimid magaalada Mumbai”
“Shaqada ugu horeesay ee uu qabtay waxay ahayd inoo noqdo isbasiini maqaayada tir tiro, kadib waxaa u xigtay inuu noqday kabal yeeri (waiter) kadibna maamulaha maqaayadii uu shaqada ka bilaabay ayuu noqday ilaa ugu dambeyntii uu maqaayada isaga la wareegay milkiyadiisa”
“Aabo waxa uu Mumbai kasoo shaqeesto ayuu nolosheena ku dabari jiray wuxuuna ahaa qof karti badan oo aan wax badan kaga daysaday”
Sidaa darteed Suniel Shetty asigoo aad u dhalin yar ayuu Mumbai yimid wuxuuna hadafkiisa ahaa inuu noqdo cayaaryahan cayaarta Cricket-ka cayaaro sidaasna magac ku yeesho.
Sunil waayihiisii iskuulka wuxuu caan ku noqday cayaarta feerka (Boxing) asigoo hada ka hor ku guuleestay tartanka feerka ee iskuulada loo dhigay waxaana la gudoonsiiyay suunka madow.
Suniel Iyo Markii Uu Bilaabay Inuu Noqdo Wiil Wax Qabsan Karo:
Suniel asigoo 18-jir ah ayuu furtay dukaanka dhanka lagu gado waxaana ka caawiyay aabihiis inuu ganacsi bilaabo.
Madaama Suniel uu ahaa wiil jir dhisan wuxuu sameyn jiray habeenkii ama gelinka dambe inuu tartan u galo ka mid noqoshada dadka dharka xayeysiiyaan.
Suniel ayaa sheegay in dukaankiisa uu sare u kacay markii uu helay fursad shaqo habeenkii uu dhanka Model-ka kaga qayb qaadan jiray.
Xidigan ayaa xusay in dukaankiisa ay imaan jireen labo xidig dhamaadkii 80-kii waana Jackie Shroff oo Super Star weyn ahaa markaas iyo Salman Khan oo ahaa wiil soo baxaayay.
Suniel ayaa sheegay in Salman iyo Jackie ay waqti badan la qaadan jireen sidoo kalena macaamiishiisa qaaska ah ka mid ahaayeen.
Xidigan ayaa xusay markii uu Salman iyo Jackie bartay in macaamiil badan ganacsigiisa kusoo xirmeen sidoo kalena uu dhaqaalo ku filan dukaankiisa ka abuuray.
Sunil ayaa ka dhawaajiyay inuu dhiiri galin ka helay Salman iyo Jackie ku biirista Bollywood-ka waxayna marwalbo dhihi jireen “Sunil qof kugu murqo ah xiligan Bollywood-ka kuma jiro!”
Laakiin xidigan marnaba ma aaminsaneyn inuu atoore noqon karay xiligaas!
Suniel Iyo Sidii Uu Bollywood-ka Kusoo Galay:
Sanadii 1988 Suniel nasiib wanaag wuxuu la kulmay qarash gareeyaha caanka ah Pahlaj Nihalani oo ku arkay meel dharka lagu xayeysiinayay.
Pahlaj Nihalani ayaa Suniel ku dhiiri galiyay inuu Bollywood-ka kusoo biiro wuxuuna atoore kowaad kaga dhigay filim lagau magacaabo Ek Aur Faulad.
Filimkan Action-ka ahaa David Dhawan ayaa Director ka ahaa markii 100% la dhameestiran waxaa is maan dhaafeen qarash gareeye Pahlaj Nihalani iyo Director David Dhawan midaasna waxay sababtay in filimkan aan marnaba tiyaatarada la saarin lana daawanin ilaa maantadan aan joogno!
Suniel gabi ahaanba Bollywood-ka ka niyad jabay wuxuuna iska sii watay ganacsigiisa inuu balaariyo sidoo kalena wuxuu jeceyl la wadaagay Mana Shetty oo ay sanadii 1991 is guursadeen.
Suniel ayaa kulan la qaatay qarash gareeye Raju Mavani oo u dhiibtay filimkiisii Balwaan sidoo kalena filimkan Divya Bharti ayaa atirisho looga dhigay halka Danny Denzongpa uu laadar ka ahaa.
Suniel ayaa walaaca ka baxay markii filimkiisii Balwan tiyaatarada la saaray 11 September sanadii 1992 wuxuuna filimkan noqday mid guul dhex dhexaad ah gaaray balse xidigan ayaa siweyn loogu amaanay qaab jiliinkiisa iyo sida uu Action-ka ugu wacan yahay.
Suniel wixii markaas ka dambeeyay aqoonsi fiican ayuu helay wuxuuna sanadii 1993 la yimid labadii filim ee doorar kala duwan uu ku matalay Waqt Hamara Hai iyo Pehchaan oo ay Saif Ali Khan isla sameeyeen.
Waqt Hamara Hai wuxuu noqday filim guul dhex dhexaad ah gaaray sidoo kalena ay isku fahmeen Akshay Kumar ayagoo noqdeen labo xidig oo 90-kii marwalbo aflaan isla sameyn jireen ilaa bilawgii qarnigan.
Filimkiisii kale Pehchaan guul ma gaarin inkastoo Suniel qaab jilinkiisa si wacan loo amaanay kana caawiyay inuu dalaab filimo oo kala duwan helo.
Laakiin Suniel Shetty wuxuu si rasmi ah u noqday Super Star dhanka Action-ka Bollywood-ka looga haray sanadii 1994 madaama badanaa filimadii uu sameeyay xidigan dhamaantoodii guulo waa weyn gaareen.
Filimkii Mohra ee uu Akshay la sameeyay wuxuu noqday Hit-kiisii ugu weyna sanadkaas asigoo Blockbuster noqday sido kalena filimka Dilwale ee uu Ajay Devgn la jilay isagana Super Hit ayuu noqday halka filimadii uu kaligiis hogaamiyaha ka ahaa Anth iyo Gopi Kishen guulo wacan gaareen.
Suniel 5-filim ee uu sanadii 1994 sameeyay kaliya filimka Hum Hain Bemisaal oo ay Akshay isla jileen ayaa Flop ka noqday.
Suniel Shetty Iyo Markii Uu Noqday Atooraha Lacagaha Ugu Badan Filimada Ku Sameeyo:
Suniel ayaa la isku raacay sanadii 1994 inuu yahay xiligaas atooraha kowaad ee dhanka Action-ka looga haray (Bollywood Number One Action Hero).
Sidaa darteed dhamaan filim sameeyayaasha ayaa kusoo xoomeen inay u dhiibtaan aflaan kala duwan waxaana xiligaas lagu jiray xiligii Bollywood-ka laga xiiseyn jiray sameynta filimada Action-ka ah.
Sidaa darteed wargeska The Times of India ayaa xaqiijiyay intii u dhaxeesay 1995 ilaa 1996 Suniel uu ahaa atooraha lacagaha ugu badan filimada Bollywood-ka ku sameyn jiray asigoo qaadan jiray lacago u dhaxeeyo 1.50 Crore ilaa 2 Crore!
Suneil wey ka yara hoos baxday waayo xidigan tayada filimada kama uusan fikirin ee tirrada filimada ayuu fiiriyay sida darteed dhamaan filimadii uu sameeyay sanadii 1995 ma jirin mid guul dhex dhexaad ah xitaa gaaray waxayna filimadaas kala ahaayeen Surakshaa, Raghuveer, Gaddaar iyo Takkar.
Xidigan hal sano gudaheeda awoodiisii kuma wiiqmin wuxuuna sanadii 1996 sameeyay soo laba kacelyn madaama filimkiisii Krishna markii tiyaatarada la saaray uu 100% ku furmay.
Boxoffice India ayaa markaas sheegtay in filimka Krishna 100% uu ku furmo wax la yaab ah noqotay balse waxay midaas u nisbeeyeen jeceylkii waalida ahaa oo ay dhalinta Hindiya u qabeen Action-ka Suniel Shetty.
Filimkii Krishna guul dhex dhexaad ah ayuu gaaray wuxuuna noqday Semi Hit waayo sheekadiisa in badan dadka kama helin laakiin awooda Suniel ayuu ku bad baaday.
Suniel filimadiisii kale ee sanadii 1996 soo baxeen dhamaantooda dhulka ayay galeen kuwaas oo kala ahaayeen Ek Tha Raja, Vishwasghaat, Shastra, Sapoot iyo Rakshak inkastoo uu filimka Rakshak ganacsi fiican sameeyay hadana lacagaha qaaliga ah ee lagu iibsaday ayaa sababtay inuu guul dareesto.
Suniel Shetty Iyo Markii Uu Wajiga Badashay
Madaama Suniel uu ka faa’iideesan waayay fursadii soo martay intii u dhaxeesay 1995 ilaa 1996 sidoo kalena filimadiisii badanaa guul dareesteen xidigan ayaa badalay qorshihiisa nolosha fanka.
Sidaa darteed Suniel wuxuu aqbalay inuu ka qayb qaato sameynta filimkii weynaa Border ee atoorayaasha faraha badan la isugu keenay.
Dadka qaar ayaa ku tilmaameen go’aanka Suniel ku aqbalay filimkii Border inuu ka shaleyn doono madaaaa atoorayaal isaga fanka kaga soo horeeyeen sida Sunny Deol iyo Jackie Shroff ku jireen.
Laakiin markii filimkii dagaalka ahaa Border tiyaatarada la saaray wuxuu Suniel ku helay amaan tariikhi ah doorkiisii wadaninimo sidoo kalena waxaa lagu tilmaamay geesi sharafka Hindiya ku difaacay filimka Border.
Border wuxuu noqday filimkii ugu weynaa sanadii 1997 asigoo All Time Blockbuster noqday ilaa haatana Suniel bandhigii uu ka muujiyay waa mid lagu xasuusto wuxuuna u tartamatay abaal marinta Filmfare Awards qaybta atoore caawiye balse kuma uusan guuleesanin sanadkaas.
Suniel filimkiisii labaad ee sanadii 1997 guusha weyn u gaaray wuxuu ahaa Bhai weliba filimkan maalin Diwali ah waxaa tiyaatarada lala saaray filimkii Blockbuster-ka weyn noqday Dil To Pagal Hai.
Sidoo kalena Suniel sanadii 1997 waxaa guul dhex dhexaad ah (Average) u gaareen filimada kala ah Judge Mujrim iyo Qahar.
Suniel sanadii 1997 labo filim ayaa ka guul dareesteen filimkii soo daahay Dhaal iyo Prithvi oo ay Shilpa Shetty isla jileen.
Suniel Iyo Markii Uu Culeeska Weyn Soo Wajay Labo Sano Wax Guul Ah Arkin:
Suniel culeeska ayaa ku batay wuxuuna xidigan markii ugu horeesay la kulmay mudo labo sano ah in filimkiisa uusan guul Boxoffice-ka ka gaarin.
Waayo sanadii 1998 filimadii uu la yimid dhamaantooda weyn guul dareesteen Vinashak – Destroyer, Aakrosh iyo Humse Badhkar Kaun inkastoo filimka Vinashak qaab jilinkiisa wadaninimo aad loogu amaanay xidigan.
Sidoo kale sanadii 1999 waxba uma dhaamin sanadkii ka horeeyay madaama filimadiisii Hu Tu Tu, Bade Dilwala iyo Kaala Samrajya guul dareesteen sidoo kalena ganacsi aad u liito ay sameeyeen.
Maxaa Sababay In Suniel Hormarkiisa Fanka Hoos U Dhac Soo Wajaho:
Dadka filimada ka faaloodaan sidoo kalena Boxoffice-ka wax ka qoraan labo arin ayay u nisbeeyeen in Suniel Shetty awoodii uu bilawgiisa fanka ku qabsaday meesha ka baxday.
Mida kowaad waxay ahayd in xidigan uu awoodi waayay inuu iska diido filimada isku eg eg waayo qarash gareeye kasto lacag ayuu siin jiray kadibna Suniel filim Action ah ayaa loo dhiibi jiray midaas waxay dishay hormarkiisa fanka.
Waayo Suniel waxaa laga rabay awoodiisa inuu ku dalbado sameynta filimo sheeko ahaan iyo fariin ahaan kala duwan.
Mida kale waxay ahayd in Suniel uu waqtigiisa ugu badan dhanka shaqada ku lumiyay la shaqeynta shaqsiyaad Bollywood-ka ku cusub.
Suniel wuxuu awood u lahaa inuu filim sameeyayaasha ugu caansan la shaqeeyo 90-kii hadana wuxuu ka doorbiday kuwo saaxada ku cusub oo aan sameyn karin sheeko fariin adag xambaarsan inuu la shaqeeyo.
Sidaa darteed axsaankii badnaa ee uu 90-kii u sameyn jiray Director-ka fanka ku cusub waxay dhaxal siisay inuu asigiisa uu ka sareyn jiray ka haro!!
Suniel Shetty iyo Bilawgii Qarnigan Marka Uu Atoore Caawiye Isku Badalay:
Suniel si uusan fanka kaga harin sidoo kalena isaga qaado culeeska ka qabsaday in filim kaligiis hogaamiye ka ahaado marwalbo wuxuu doortay inuu sameeyo filimada atoorayaasha badan kula jiraan (Multi Starrer movies).
Sidaa darteed sanadii 2000 guulo wacan ayay gaareen aflaantiisii asigoo mid walbo doorkii uu ku yeesha siweyn loogu amaanay filimada u guuleesteen waxaa ka mid ahaayeen Refugee, Jungle, Dhadkan iyo Hera Pheri.
Filimka Dhadkan wuxuu ka caawiyay inuu markiisii ugu horeesay ku guuleestay abaal marinta Filmfare Awards qaybta laadarka ugu wanaagsan.
Sidoo kalena filimkiisii shactirada badnaa Hera Pheri isagana wuxuu noqday filim Classic ah oo ilaa haatan Hindiya laga jecel yahay.
Laakiin labadii filim ee uu hogaamiyaha ka ahaa Suniel Aaghaaz iyo Krodh kuwo guul dareesteen midaasna niyad jab ayuu ka qaaday waayo waxay ahaayeen filimo sheeko ahaan aad loo amaanay balse ganacsi wacan sameyn waayeen.
Suniel sanadii 2001 wuxuu sameeyay 6-filim oo sheeko ahaan kala duwan balse ma jirin mid guuleestay ama ganacsi wacan sameeyeen.
Filimadiisa guul dareesteen sanadii 2001 waxay ahaayeen Kuch Khatti Kuch Meethi, Officer, Pyaar Ishq Aur Mohabbat, Ittefaq, Yeh Teraa Ghar Yeh Meraa Ghar iyo Ehsaas: The Feeling.
Suniel culeeska ayaa ka dagay sanadii 2002 kadib markii filimkiisii Awara Paagal Deewana oo ay Akshay Kumar isla sameeyeen uu guul wacan gaaray gudaha Hindiya iyo suuqyada caalamka.
Sidoo kalena filimkiisii Action-ka ahaa Kaante oo uu xidigaha badan la sameeyay isagana ganacsi macquul ah ayuu gudaha Hindiya ka sameeyay balse waa filim guul dareestay (Below Average) madaama lacagta lagu qarash gareeyay uu kuligeed soo wada celin waayay.
Suniel filimadiisii kale ee sanadii 2002 soo baxeen dhamaan wey guul dareesteen waxaana ka mid ahaayeen Annarth, Jaani Dushman: Ek Anokhi Kahani, Maseeha iyo Karz: The Burden of Truth.
Xidigan nasiib wuxuu u lahaa inuu filim walbo kasoo muuqdo madaama uu iska qaaday cuuleska iyo masuuliyada ah inuu filim hogaamiye ka noqdo.
Sidaa darteed sanadii 2003 waxaa guul fiican u gaaray filimkii Qayamat: City Under Threat ee uu Ajay devgan la sameeyay.
Balse filimadiisii kala ahaa Baaz: A Bird in Danger iyo LOC Kargil wey guul dareesteen inkastoo rajo wanaagsan laga qabay inay gansci wacan sameeyaan.
Isla sanadii 2003 Suniel shirkada filimada qarash gareyso oo lagu magacaabo Popcorn Motion Pictures ayuu sameestay filimkii kowaad ee uu maal galiyay wuxuu ahaa Khel sidoo kalena asiga iyo Sunny Deol ayaa wada jileen laakiin filimkan wuxuu noqday mid guul dareestay (Flop).
Suniel sanadii 2004 wuxuu sameeyay filimo kala duwan ee uu doorar kale ku duwan ku matalay balse badankooda atoore caawiye ayuu ka ahaa.
Filimkiisii guusha ugu weyn sanadii 2004 u gaaray wuxuu ahaa Main Hoon Na ee uu doorka laadarka ku matalay sidoo kalena SRK atoore kowad ka ahaa filimkan ayaa Hit dhameestiran noqday sidoo kalena xidigan doorkiisa amaan wacan ayuu ku helay asigoo u tartamay laadarka ugu wanaagsan ee shirkada Filmfare Awards bixiso.
Sidoo kalena filimkii Hulchul ee shacitarada atoorayaasha badana ku jireen isagana Hit dhameestiran u noqday Suniel laakiin dhamaan filimadiisii kale daadka ayaa qaaday sida Rudraksh, Lakeer – Forbidden Lines, Aan: Men at Work iyo iyo filimkii Rakth ee uu qarash gareeyaha ka ahaa.
Suniel waxba uma dhaamin sanadii 2005 sanadihiisii hore waayo inta badan filimadii uu sameeyay waxay noqdeen kuwo guul dareesteen sida Padmashree Laloo Prasad Yadav, Blackmail, Chocolate: Deep Dark Secrets iyo Deewane Huye Paagal ee uu door dhameestiran ku lahaa.
Kaliya filimka Dus ee uu atoorayaasha badan la sameeyay Suniel ayaa sanadii 2005 u noqday mid guuleestay.
Suniel Iyo Marka Guushiisa Ay Ka Badatay Guul Daradiisa:
Xidigan waaya araga ah sanadii 2006 sedex filim ayaa guul wacan u gaareen Phir Hera Pheri oo Super Hit noqday iyo labada filim ee kale kuwaas oo guulo dhex dhexad ah gaareen Chup Chup Ke iyo Apna Sapna Money Money.
Laakiin guuldaradiisii ayaa aad u badneyd sanadii 2006 waxaana xidigan ka dhaceen filimada kala ah Shaadi Se Pehle, Fight Club, Darna Zaroori Hai, Aap Ki Khatir iyo Umrao Jaan.
Suniel Shetty dadaalkiisa ayuu sii watay inkastoo xidigan aad u bateen filimada ka qasaarayeen xitaa asigoo doorka atoore caawiye u badashay.
Sida darteed sanadii 2007 labadiisii filim Cash ee uu laadarka ka ahaa iyo Dus Kahaniyaan waxay noqeeen kuwo Flop noqdeen, balse xidigan filimkiisii Shootout at Lokhandwala ee uu atoorayaasha badan la sameeyay ayaa guul wacan gaaray sanadii 2007.
Suniel sanadii 2008 wuxuu ku af bilaabay filimkii shactirada ahaa One Two Three ee guusha wacan u gaaray balse waxaa dib u dhigeen filimada kala ah Mr. Black Mr. White, Mission Istaanbul iyo Mukhbiir oo dhamaantoodii guul dareesteen.
Suniel sidoo kale sanadii 2009 wuxuu la yimid labo filim oo kala ahaa Daddy Cool iyo De Dana Dan kaliya filimka De Dana Dan oo ay Akshay Kumar isla jileen ayaa guul dhex dhexaad ah u gaaray.
Xidigan sanadii 2010 filimkiisii Red Alert: The War Within ayuu la yimid inkastoo filimkan ganacsi ahaan guul dareestay hadana sheeko ahaan siweyn ayaa loo amaanay wuxuuna Suniel ku qaatay abaal marinta atooraha ugu wanaagsan Koonfur Asia sidoo kalena shirkada Stardust Search Light atooraha ugu fiican Bollywood-ka ayay kusiisay filimkan sheekadiisa aadka loo amaanay.
Sidoo kale Suniel sanadii 2010 wuxuu sameeyay filimadii ganacsi ahaan guul dareesteen Tum Milo Toh Sahi iyo No Problem.
Suniel sanadii 2011 sidoo kale wuxuu sameeyay filimada kala ah Thank You iyo Loot laakiin labada ganacsi ahaan wey guul dareesteen weliba filimka Loot isaga ayaa qarash gareeye ka ahaa.
Suniel sanadii 2012 wuxuu sameeyay hal filim oo kaliya wuxuuna ahaa Mere Dost Picture Abhi Baki Hai balse filimkan ee uu atooraha kowaad ka ahaa waa mid daadka qaaday oo bur buray.
Ruug cadaagan sanadii 2013 filimkii Enemmy oo kaliya ayuu sameeyay isagana filimkan waa mid bur buray oo gudaha Hindiya ka gadmi waayay.
Suniel sanadii 2014 muuqaal marti ah wuxuu ku yeeshay filimkii weynaa Jai Ho ee Salman Khan hogaamiyaha ka ahaa wuxuuna noqday mid guuleestay.
Balse labadii filim ee uu doorka dhameestiran ku lahaa Koyelaanchal iyo Desi Kattey ee sanadii 2014 usoo baxeen waa kuwo bur bureen ganacsi ahaana lagu qasaaray.
Sanadkii 2015 xidigan waxaa tiyaataro kooban loo saaray filimka 2 Chehare oo ahaa filim 20-sano ka hor la sameeyay balse haatan tiyaatarada la saaray waana mid guul dareestay mana jirin daawadayaal isku mashquuliyeen.
Sanadkii hore 2017 waxuu door kulahaa filmkii A Gentleman ee u Sidharth Malhotra hogaaminaayey balse mashruuc bur buray ayuu noqday filmkaan sido kale sanadkaan 2018 waxuu muuqaal marti ah kulahaa filmkii Welcome To New York ee fashilka weyn kudhacay.
Suniel sanadka dambe filmka Bharat ayuu door kulahaan doona sida lasheegay halka Hera Pheri 3 la hadal hayo in la sameen doono waxaana macquul ah in 2019 qeybaha dambe la daawan doono…
Suniel Shetty Iyo Noloshiisa Gaarka Ah:
Hantida nadiifka ah ee uu heesto waa in ka badan $10 Million
Magaca xaaskiisa: Mana Shetty wuxuu guursaday sanadii 1991
Caruurta u joogto: Athiya Shetty (25-sano ayay jirtaa waana atirisho), Aahan Shetty (22-sano ayuu jiraa dhawaan ayuu atoore noqon doonaa)
Lacagta uu halkii filim ku sameeyo: 3 Crore (504,847)
Daqliga sanad walbo fanka kasoo galo: $ 1 Million
Halka uu daqliga kasoo galo: filim jilis, cayaarta Cricket-ka, qarash gareeye, ganacsade iyo Tv-yada.
Abaal Marinada Ugu Muhiimsan Ee Uu Suniel Ku Guuleestay:
1998: Zee Cine Best Actor Award for Border
2001: Bollywood Movie Award Best Actor for Hera Pheri
Suniel Shetty Iyo Hoteelada Uu Leeyahay:
Suniel wuxuu ku leeyahay magaalada Mumbai Hotel weyn oo ay inta badan dadka dabaqada sare ee reer Hindiya ku nastaan.
Suniel Shetty Iyo Maqaayadaha Uu Leeyahay:
Jilaagan maqaayado badan ayuu leeyahay wuxuuna ku leeyahay magaalooyinka Mumbai, Pune, East Punjab, iyo meelo kale.
Suniel Shetyy Iyo Aqalka Uu Ku Leeyahay Magaalada Mumbia:
Suniel Shetty Iyo Baabuurta Uu Xidigan Leeyahay:
Waxaa maqaalkan qoray Zakarie Abdi halka aan anigana soo Update Gareyay dhalashada Suniel aawged…..
Waxaa Aqrisay 1,751